मंगलबार, बैशाख १४, २०७८ लक्ष्मण थामी
काठमाण्डौं - माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई माओत्सेतुङले चीनमा आफ्नो बिशिष्टता अनुसार प्रयोग गरेर एउटा राजनीतिक क्रान्ति सफल पार्नुभयो । चिनियाँ क्रान्ति र त्यतिबेला प्रतिपादन गरिएको विचार र कार्यदिशाका सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठुलो बहस भयो । धेरै कम्युनिष्ट पार्टीले त्यसलाई माओ विचारधाराका रुपमा सश्लेषण गरे । पेरुमा गोञ्जालेले पहिलो पटक माओवादको रुपमा स्वीकार गरेर आन्दोलन अघि बढाए ।
त्यसपछि नेपालमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई सार्वभौम सिद्धान्तका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसैलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्धको थालनी भयो । र पार्टीको नाम पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) राखियो । पार्टीको नामको पछाडी माओवादी राख्नुको अर्थ माओले प्रतिपादन गरेको विचारको आत्मासातीकरण, रक्षा, प्रयोग र विकास गर्नु थियो ।
पार्टीले आत्मासाथ गरेको बैचारिक मुल्यमान्यताको आलोकमा पार्टीको नामाकरण गरिएको हो । किनकी पार्टीको नाम उसले अंगिकार गरेको राजनैतिक तथा वैचारिक कार्यदिशासँग अभिन्न रुपले जोडिएको हुन्छ ।
दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा त्यही अभ्यास भयो । परिणामस्वरुप २०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादी आन्दोलन मुलुककै मुख्य शक्तिको रुपमा उदायो । त्यसपछिका दिनमा भने फेरी माओवाद मान्ने या नमान्ने भन्नेमा बिवाद सुरु भयो । एकताकेन्द्र मशालबाट एकिकरण प्रक्रियामा आएको नारायणकाजी श्रेष्ठ समुहले माओवाद मान्न नसकिने बताएपछि माओवाद÷विचारधारा राख्ने र थप बहस गरेर टुंगोमा पुग्ने भनियो । मुल पार्टीबाट अलग्गिएका मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, गोपाल किरातीहरुले पनि नयाँ पार्टीको नाममा माओवादीको फुर्को जोडे ।
नेकपा एमालेसँग पार्टी एकिकरणका बेला माओवादी आन्दोलनका मुख्य सुत्रधार मानिएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं माओवादी नाम त्याग्न तयार भए । त्योसँगै २१ औं शताव्दीको जनवादलाई पनि कोमामा पुर्याईयो ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई ब्युँताईदिएको छ । माओवादी आन्दोलनबाट जन्मिएको ठुलो पार्टीको रुपमा सर्वोच्चले पुन अस्तित्वमा ल्याईदिएको छ । सर्वोच्चको फैसला लगत्तै बसेको उक्त पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पुनः पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने एजेण्डा पेश भयो ।
यसअघि नेकपा एमालेसँग एकिकरणको सन्दर्भमा कमसेकम माओवादलाई महाधिवेशनसम्म बहसको विषय बनाउने समझदारी थियो । अहिले पार्टीको नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नेताहरु किन पुग्दैछन् ? के एमालेभित्रको असन्तुष्ट समुहलाई एकताको बाटो खोल्नकै लागि पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न लागिएको हो ? यदि त्यस्तो हो भने माओवादी आदोलनको उठान र नेतृत्व गर्ने नेताहरुमा कतिसम्म बैचारिक विचलन आएको रहेछ भन्ने कुरा पुष्टी हुन्छ । यो पार्टीको नामलाई मुख्य बैचारिक प्रस्थापना र मान्यतासँग जोड्नुको सट्टा सामान्य प्राविधिक विषय बनाईएको उदाहरण हो ।
समकालिन राजनीतिमा माओवादी आन्दोलनको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने नेता पाउन गाह्रो छ । प्राविधिक रुपमा पार्टीको नाम माओवादी देखिएपनि व्यवहारतः नेताहरुले माओवादलाई तिलाञ्जली दिईसकेका छन् ।
डा. वावुराम भट्टराईले उहिल्यै माओवादी आन्दोलन परित्यागको घोषणा गरिसकेका हुन् । माओवादी आन्दोलनको रक्षक बताउने विप्लवले समेत पार्टीको नाम नेपाल कमयुनिष्ट पार्टी मात्रै राखेका छन् ।
माओवादी नामप्रति कसैले स्वामित्व ग्रहण नगर्नुले सिंगो माओवादी आन्दोलन र त्यसले स्थापित गरेका बैचारिक मुल्यमान्यतासँग मोहभंगको व्यबहारिक पुष्ट्याँई हो ।
अब मोहन बैद्य र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पार्टीमा माओवादीको फुर्को बाँकी छ । प्रचण्डले पार्टीको नामबाट माओवादी केन्द्रको फुर्को हटाए भनेपनि आश्चर्य मान्नुपर्ने विषय रहेन । किनकी माओवादी आन्दोलनको रक्षा, प्रयोग, विकास र विस्तारको लक्ष्यबाट उनी निकै स्खलित भएको देखिन्छ । आफुलाई शक्तिको केन्द्रमा राखिराख्ने नाममा जुनसुकै समुहसँग मिल्ने र वैचारिक मान्यतालाई तिलाञ्जली दिने प्रवृत्तिले अब माओवादी आन्दोलन बचाउन सकिँदैन ।
‘नयाँ खोज्दै जाँदा पुरानाहरु छुटेको प्रचण्डको स्वीकारोक्ती छ । पुरानाहरुसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने बताएपनि अब उनले माओवादी आन्दोलनलाई पुर्नसंगठित गर्ने सम्भावना र आधार भत्किसकेको छ ।
माओवादी आन्दोलन मुक्ति या मृत्युको कसम खाएर, टाउकोमा कात्रोको कफन बाँधेर युद्धमैदानमा लामबद्ध हज्जारौं पुर्व जनमुक्ति सेना, शहिद, बेपत्ता, घाईते, अपांग र लाखौं कार्यकर्ताहरुको आँशु, रगत र पसिनाको जगमा हुर्किएको थियो ।
युद्धमा होमिएकाहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा उनीहरु देशविदेशमा दयनीय जीवन जिउन बिवश छन् । दुई पटकसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरुको व्यवस्थापनको विषयमा केही हुन सकेन । बरु केपी ओली सरकारले ढिलै भएपनि उनीहरुलाई लोकतान्त्रिक योद्धाको रुपमा सम्मान दिन सुरु गरेको छ । अब उनीहरु पुनः प्रचण्डको संकटमोचन र रक्षाकवचका लागि तयार हुने अवस्था छैन ।
माओवादीहरुले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने माओत्सेतुङको एउटा भनाई छ, ‘राजनीतिक र विचारधारात्मक कार्यदिशा सहि वा गलत हुनुले सबै कुराको फैसला गर्छ, सहि छ भने सबै कुरा प्राप्त भएर जान्छन्, बेठिक छ भने भएका कुराहरुपनि गुम्दै जान्छन् ।’
यही उक्तिलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दापनि पछिल्लो कालखण्ड पार्टी र नेतृत्वले अख्तियार गरेको विचार र कार्यदिशा गलत सावित भएकै कारण आज माओवादी आन्दोलनले सबै गुमाउँदै जानुपरेको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।
जनयुद्धका क्रममा उठान गरिएका राज्यसत्ता परिवर्तनको मुद्धा सफल भयो । कम्युनिष्ट नैतिकता र आदर्श, सर्बहारावर्गीय व्यवहार, आचरण, जीवनशैली, कार्यशैली जस्ता विषयबाट नेताहरु च्युत भए । आन्दोलनका क्रममा घोकाईएका दर्शन÷सिद्धान्त र नेताहरुको आजको व्यवहारबीचको आन्तरविरोध, माओवादी आन्दोलन धरासायी हुनुको अर्को कारण हो । आत्माकेन्द्रित, स्वार्थकेन्द्रीत, सत्ताकेन्द्रीत, पदकेन्द्रीत प्रवृत्तिले पार्टी जनताबाट अलगथलग बन्न पुग्यो ।
दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्ने भन्ने नेताहरु आफै दलाल पँुजीवादको दलदलमा फसे । यतिसम्मकी माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेको समानुपातिक÷समावेशी उपलब्धीको भद्धा व्यापारिकरण गरियो । समानुपातिक टिकटहरु आन्दोलनमा लामो समयसम्म त्याग, तपस्या र वलिदान गरेको व्यक्तिलाई दिनुको सट्टा धनाढ्यहरुको हातमा थमाईयो । त्यसरी नेताहरुले वलिदानको उपलब्धी र मुल्यलाई कौडीको भाउमा व्यापार गरे ।
माओवादी आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन त गर्यो तर स्थापित गरेका थुप्रै नयाँ आयाम र मुल्यहरु ईतिहाँसकै गर्भमा विलिन हुँदैछ । प्रचण्डकै नेतृत्वमा माओवादी आन्दोलन उठान भयो र उनकै नेतृत्वमा विघटन र बिसर्जनको अवस्थासम्म पुग्दैछ । माओवादी जनयुद्ध एउटा ईतिहाँस बन्यो । त्यसमा बलिदान गर्ने हज्जारौं शहिद, बेपत्ता, घाईते तथा अपांग र लामबद्ध लाखौंलाख कार्यकर्ताहरु ईतिहाँसका पात्रहरु बने ।
त्यसैले उनीहरुका अगाडी अब माओवादी आन्दोलनको दुखद अवसानको अन्तिम प्रतिक्षा गर्नुबाहेक अरु विकल्प रहेन । ईतिहाँस र बिरासत भनेको कुनै अमुक नेताहरुको अस्तित्व रक्षाको साधन होईन, विचार र आन्दोलनको प्रतिक हो । आम कार्यकर्ता, जनता, शहिद, बेपत्ता योद्धा, घाईते अपांगका परिवारले खाजेको ईतिहाँस र विरासतलाई रद्धीको टोकरीमा मिल्काईसकिएको छ । त्यसैले माओवादी बिचार र आन्दोलन बिसर्जनको दिशातर्फ जानुको जिम्मा नेताहरुले लिनुपर्दछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख १४, २०७८, ०२:४१:००